Isu Tinokoshesa Zvishandiso Zvatinogona Kushandisa | Martech Zone
Isu Tinokoshesa Zvishandiso Zvatinogona Kushandisa
China, December 23, 2010 Mugovera, October 18, 2014 Douglas Karr
Vhiki rino rave svondo rakaomarara… kushushikana kwakawanda, shanduko zhinji, uye zvakanyanya kufambira mberi. Pazera ramakore makumi mana nemaviri, ndakagadzika munzira dzangu asi ndaive nechinoitika svondo rino chakanyanya kurova.
Ndanga ndichitaura kwenguva yakati rezvemagariro kushamisika - asi kuti makambani anga achitogarisana nevamwe ndeavo chaivo vanowana uye vanowana kubva pasocial media. Makambani asiri ehukama, kana ari kunyange anopokana nehukama, kazhinji haatombo zive kudyara mumasocial media. Sei vaizozviita? Ivo havana kumbobvira vawana pamarkethare kana hutungamiriri kuburikidza nekugara. Semhedzisiro - se nyowani midhiya agency, isu tinosundira mamwe makambani mumasocial media… asi mamwe isu tinosundira kune mamwe marongero ekushambadzira. Zvemagariro venhau ndizvo kwete kune wese munhu (ndine hurombo gurus!).
Izvo zvinoenda kuvanhu. Mumakore gumi apfuura, ndinotenda ndakagadzira mutengo unokosha wemakambani, vanhu, uye zviwanikwa. Ndichaidaidza yangu upfumi. Ini ndashanda nesimba kuvaka yangu upfumi. Handina kuzvitenga. Zvinotora makore nemakore ekumanikidzwa nguva dzose. Pandakadzokera shure, yakavigwa. Pandakashanda nesimba pazviri, ndakadzorera hupfumi hwangu inch imwe panguva. Nehuwandu hwenguva uye nesimba zvandakaisa mukuvaka pfuma yangu, ndinochikoshesa. Inokosha. Kambani yangu yakazvarwa nekuda kwehupfumi hwangu.
Ini handichengete pfuma yangu kwandiri, zvakadaro. Uchaona izvi nebhurogu, kambani, hofisi, maturusi, bhuku, zviitiko, mashandisiro, redhiyo show ... zvese izvi zvakavhurika kune chero munhu waanoda kutora mukana wavo. Ndichiri kuchengetedza pfuma yangu, asi ini handingamboiviga uye kuichengeta kwandiri. Nei ini? Ini ndinoda kuti vamwe vabatsirwe nefuma yangu, futi.
Asi vamwe havadaro. Zvandasvika pakuziva ndezvekuti ndinokoshesa pfuma yangu uye ndinoiisa mukuremekedza kwakadai nekuti ndinoziva maitiro Shandisa. Ndiri kuona zvichikwanisika uye ndoziva mashandisiro akaita hupenyu hwangu. Ndinoziva kuti ichandipa ini uye kune chero ani zvake anogona kuwedzera it zvakanaka. Kana mumwe munhu akandiratidza garaji ravo nemakumi ezviuru zvemadhora anokosha maturusi, ndingangogutsurira musoro ndoramba ndichifamba. Dai vaive mamakanika, zvakadaro, ivo vanonzwisisa kuti iro bhokisi rematurusi raigona kuvapa iro basa uye nehupenyu hwese hwebasa. Ini handikwanise kuishandisa, saka handikoshese.
Kana mumwe munhu akaziva kukosha kwepfuma yangu, zvinotyisa. Ndakaona vhiki ino kuti vamwe havangakwanise, zvakadaro! Chengeta izvo mundangariro apo iwe uchitaura kumakambani nezve social media uye online kushambadzira. Kana makambani ari kukura uye kubudirira pasina ivo, ivo haigoni ziva kukosha kwavanogona kuunza. Iwe unofanirwa kuzviratidza kwavari. Uye iwe unogona kusakwanisa.
Zvakare chengetedza mundangariro nevanhu… vamwe vanhu vanofunga network yako uye kushamwaridzana kushamwaridzana haisi mari, ivo vanofunga kuti uri kutambisa nguva yako. Zvinogona kunzwika zviri pachena, asi we ingokoshesa zvishandiso izvo we ziva we Unogona kushandisa.
Tags: kushambadzira maapplicationkushambadzira chikuvamarketing softwareSoftwaremidziyoukoshi
WordPress Plugin: Blogging Check
Zvita 26, 2010 na6: 45 PM
Iyo yakanaka posvo! Ndatenda.
Zvita 28, 2010 na9: 55 PM
Chaizvoizvo kutumira, Doug. Zvinhu zvakanaka zvekufunga nezvazvo…